Codbixinta doorashada - meesha iyo sida ay u codeeyaan | USAHello | USAHello
Codbixinta doorashada - meesha iyo sida ay u codeeyaan
USA The waa dal dimoqraadi ah, taas oo macnaheedu yahay muwaadiniinta codeeyaan doortaan cida ka dhigan tahay. By isticmaalaya codkaaga, aad leedahay go'aan ku leeyihiin doorashada aad ku matali doonaa in aad bulshada, ee gobolka, iyo in xukuumadda qaranka. Read ku saabsan cidda wax dooran karta. Baro meesha, sida, iyo sababta ay u codeeyaan.
Codbixintu waa qayb muhiim ah in muwaadin ah ee USA.
Yaa codeyn kara
Ma codeyn kartid ilaa aad ka hesho dhalashada. in ay codeeyaan, muwaadiniinta waa in ay noqdaan 18 sano jir ah. Waa in ay iska diiwaan gelin si ay u codeeyaan in ay gobolka. Waxaad xaq uma laha codayn kartaa haddii aad tahay dambi ah lagu xukumay. Haddii aad iska dhig sidii mid muwaadin si aad u codayn kartaa, aad la xiri doonaa oo lagu xiro waxaa laga yaabaa in.
Diiwaangeli in ay codeeyaan
Diiwaangelinta in ay codeeyaan ka dhigan magacaaga gelinaya on liiska codbixiyayaasha ee bulshada. Waxaad iska diiwaan gelin doonaa online ama by mail. Haddii aad u guurto, waa in aad mar kale la cinwaankaaga cusub diiwaan.
Waxaad buuxin doontaa foom ah qaar ka mid ah macluumaadka shakhsiyeed aasaasiga ah. qoysaska ugu helaan macluumaad diiwaan-galinta boosta. Waxaa jira dambays ah in ay diiwaan-doorasho kasta ka hor. Gobol kastaa waxa uu leeyahay dambays ah oo kala duwan. Raadi dambeysta ah ee gobolka iyo sida loo diiwaangeliyo ee gobolka.
Xaggee in ay codeeyaan
meeshii aad codkaaga waxaa lagu magacaabaa goobta codbixinta a. goobaha codbixinta waxaa sida caadiga ah oo ku yaalla goobaha dadweynaha sida dugsiyada, kaniisadaha, ama hoolalka ciyaaraha. Waxaad isticmaali kartaa a goobta si aad u ogaato goobta codbixinta degaanka.
Haddii aad ogtahay in aad awoodo in ay codeeyaan qof ma noqon doonto, waxaad codsan kartaa codbixinta maqan. codbixinta maqan An waxaa kaloo loo yaqaan codbixinta mail-in a, maxaa yeelay codbixinta aad buuxiso guriga una dir. Tani waa dookh fiican u yahay dadka maqan tahay inta lagu jiro doorashada ama dadka aan heli karo goobta cod sababo kale ah.
Sidee in ay codeeyaan
Haddii ay tahay in aad codbixinta markii ugu horeysay, waxaad u baahan doontaa in la keeno caddeyn ku saabsan deegaanka si ay u muujiyaan in aad ku nooshahay gurigaaga. Tani waxay noqon kartaa kaarka aqoonsiga, ama biilasha korontada a, oraahda baanka ama jeeg cinwaanka aad ku dul. Haddii aad u codeeyay ka hor, uma baahnid in la keeno caddeyn ku saabsan deegaanka.
iskaa wax u qabso A ku weydiin doonaa magacaada iyo tusto inaad taas oo waab aad isticmaali karto in ay codeeyaan. waab codbixinta A waa xero yar. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad leedahay asturnaanta halka aad codkaaga. Haddii aadan ku hadli karin Ingiriis, waxaad keeni kartaa qof galay waab ah inuu kaa caawiyo inaad cod. In qaar ka mid ah dalalka, waxaa laga yaabaa inaad awoodo inaad hesho warqada codbixinta oo ku qoran luqaddaada. waxaa loo dhiibi doonaa warqad aad la magacyada musharaxiinta iyo macluumaad ku saabsan sharciyada. Waxaad u baahan doontaa in aad doorashooyin adigoo buuxinaya foomka la qalin. Marka aad samaysay, aad xirto doonaa codbixinta oo geli sanduuqa.
hoose A waa tartan ah oo xisbiyada siyaasadda dooran musharaxiintooda doorashada guud ee soo socda. Musharaxa ku guuleystay waddaa in doorashada guud ka dhanka ah musharaxa guusha xisbiga kale ee siyaasadeed ama xisbiyada. In USA, labada xisbi ee waaweyn yihiin xisbiga Democratic iyo xisbiga Jamhuuriga. In qaar ka mid ah dalalka, codbixiyayaasha oo keliya ka diiwaan gashan xisbi siyaasadeed codayn kartaa in doorashooyinka horu dhaca ah.
In doorashada guud, codbixiyayaasha u dhexeeya ku guuleysatay doorashooyinka hoose dooran. doorashada A qaranka oo lagu qabtay November labadii sanaba. Doorashada madaxweynaha oo lagu qabtay November afartii sanaba.
Doorashooyinkii degaanka waa markii codbixiyayaasha dooran xubnaha golaha, xaakinno, Maayarrada, iyo saraakiil kale oo maxalli ah. Gobolka kasta oo gobolka ah ayaa taariikhaha kala duwan ee doorashada golaha deegaanka. Waad awoodaa hesho macluumaadka doorashada gobolka iyo degmada aad.
Waa maxay sababta aan u codayn?
Codbixintu waa mid ka mid ah hababka ugu fiican ee kala ee bulshada. Waa fursad aad ku la wadaagno opinion. Waxaad ku caawin dooran kartaa wakiil in uu go'aan ah magaalada iyo dalka aad.
Raadi khayraadka dhalashada
Macluumaadka on this page ka timaadaa dowladda Maraykanka, Vote.org, oo kale ku kalsoon tahay ilaha. Waxaa loogu talagalay hanuun iyo waa la cusboonaysiiyaa inta badan ee suurtogalka. USAHello ma siiyo talo sharci ah, mana ka mid ah waxyaabaha aannu loogu tala galay in la qaado, sida la-talin sharci.